Mpianatra eny Ankatso Nanokafana tsena manokana
Betsaka ireo mpianatra tsy tafody mbola tavela eny amin'ny anjerimanontolo amin'izao fotoana izao.
Tsy afa-mivoaka mividy entana sy miantsena anefa izy ireo ka nanokafan'ny fitondram-panjakana tsena eny an-toerana nanomboka omaly. Tao Ankatso I no nisantarana izany hiitatra amina faritra maro fonenan'ireo mpianatra eto an-drenivohitra. Tanjona ny hiarovana ny mpianatra amin'ny fiparitahan'ny otrik'aretina coronavirus. Ankoatra izay moa dia nodiovina tamin'ny alalan'ny fanondrahana ranom-panafody famonoana bibikely avokoa ny tranon'ny mpianatra rehetra, hetsika tohanan'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony.